Iindlela ezili-9 zokuthintela urhwaphilizo lwefayile yePST- DataNumen
Ikhaya iimveliso DataNumen Outlook Repair Iindlela ezi-9 zokuThintela urhwaphilizo lwefayile yePST
Iindlela ezi-9 zokuThintela urhwaphilizo lwefayile yePST
Iifayile ze-PST ze-Outlook zithambekele kurhwaphilizo. Ngaba zikhona iindlela zokuthintela oku? Impendulo yile EWE! Apha ngezantsi ndidwelise i-8 most iindlela ezibalulekileyo zokuthintela ifayile yakho ye-PST kurhwaphilizo okanye ekonakaleni:
SUKUYIBAMBA ifayile yakho ye-PST. Nangona i-Outlook 2003/2007 ngoku ixhasa iifayile ze-PST ezinkulu njenge-20GB. Kwaye i-Outlook 2010 ixhasa i-50GB, isacetyiswa kakhulu ukuba ifayile yakho ye-PST mayingabi nkulu kune 10GBkuba:
Most Ukusebenza ngefayile enkulu ye-PST kuhamba kancinci
Iifayile ezinkulu kunokwenzeka ukuba zonakaliswe.
Nangona ezinye ukonakaliswa okuncinci kunokulungiswa yi-Outlook okanye i-scanpst, ukuba ifayile ye-PST inkulu, inkqubo yokulungisa isaza kuthatha ixesha.
I-Outlook 2003-2010 ngoku ixhasa ukuvula iifayile ze-PST ezininzi kunye kwipaneli yasekhohlo. Ke ngoko kuyacetyiswa ukuba uhambise ii-imeyile zakho kwiifayile ezahlukeneyo ze-PST ngemithetho ye-Outlook, ukunciphisa ubungakanani befayile nganye ye-PST.
Sukuvumela ifomathi yakho yePST ifomathi yakudala isondele kwi-2GB. IMicrosoft Outlook 2002 kunye neenguqulelo zangaphambili zinciphisa ubungakanani beFayile zobuqu (PST) kwi2GB. Nanini na xa ubungakanani befayile ye-PST isondele kwi-2GB, uya kudibana neengxaki eziguqukayo kwaye ifayile ye-PST ithambekele kurhwaphilizo. Ke ngoko, soloko uqinisekisa ukuba ifayile ye-PST yefomathi endala ingaphantsi kune 1.5GB sisenzo esihle.
Sukusebenza kumthamo omkhulu weimeyile. IMicrosoft Outlook iya kufa xa usebenzisa inani elikhulu leimeyile ngexesha elinye. Kwaye emva kokutshixeka ekufeni, kuya kufuneka ucime i-Outlook ngokungaqhelekanga eya kuthi ibangele urhwaphilizo lwefayile yePST. Umda wamava ngu 10,000 imeyile. Ke ngoko, xa uzama ukukhetha, ukuhambisa, ukukopa okanye ukucima ii-imeyile ezingaphezulu kwe-10,000, ungazisebenzisi kwibhetshi enye. Endaweni yoko, most Imeyile ezili-1,000 XNUMX ngexesha, phinda lo msebenzi de zonke ii-imeyile zenziwe.
SUKUGCINA ifayile yakho ye-PST kwidrive yenethiwekhi okanye iserver. Ifayile ye-PST yenzelwe ukugcina kwiikhompyuter zasekhaya. Sukuyigcina kwi-drive ekude okanye kwiserver kuba imeko yenethiwekhi ayinakuxhasa ukufikelela okuxineneyo kwifayile ye-PST kwaye iya kubangela urhwaphilizo lwefayile ye-PST rhoqo. Ungabelani ngefayile ye-PST kwinethiwekhi kwaye SUKUVUMELA abasebenzisi abaninzi ukuba bafumane ikopi efanayo yefayile ye-PST ngenethiwekhi ngaxeshanye, ethanda ukwenza urhwaphilizo.
Sukuyicima i-Outlook xa isasebenza. Ukuba ucima i-Outlook ngokungaqhelekanga xa isasebenza, ifayile ye-PST efikeleleka nge-Outlook ngelo xesha iya konakaliswa ngokulula. Ke ngoko, kuya kufuneka nANINI cima i-Outlook ngokungaqhelekanga kumphathi womsebenzi. Ngamanye amaxesha xa uvala i-Outlook, iya kuhlala isebenza ngasemva, ukwenza imisebenzi ethile, njengokuthumela / ukufumana ii-imeyile. Kwimeko enjalo, ngamanye amaxesha, unokubona i icon encinci ye-Outlook kwitreyi yenkqubo. Nangona kunjalo, eyona ndlela yokujonga ukuba i-Outlook isasebenza kukuba start "Umlawuli womsebenzi" kwaye ujonge ukuba "NGOKUKHANGELA." iku- "Iinkqubo" Uluhlu (Hlela uluhlu ukukunceda ukuba ulufumane ngokulula.). Ngamanye amaxesha uyakufumana i-Outlook ihlala kwimemori ngonaphakade. Oku kuqhelekile kuba i-Outlook izama ukuthumela / ukufumana ii-imeyile ngenethiwekhi kwaye inethiwekhi yakho ayisebenzi kakuhle, ke i-Outlook kufuneka ilinde ngokungapheliyo okanye emva kokuphuma kwexesha. Kwimeko enjalo, ukuba ufuna ukukhawulezisa ukuvala i-Outlook, unokukhubaza uqhagamshelo lwenethiwekhi olusetyenziswa yi-Outlook ngesandla. Emva koko, uqhagamshelo lwe-Outlook luza kuphuma kungekudala kwaye luzakulahla imisebenzi yangasemva kwaye luphume kungekudala. Kwezinye iimeko, ukuba i-Outlook okanye i-Outlook tray ihlala ingenasiphelo, unokuzama Restart I-Outlook, linda imizuzu eliqela, emva koko uphume, inkqubo enjalo inokunceda i-Outlook ukuphuma kwinkqubo ngokupheleleyo.
Soloko uqinisekisa ukuba i-Outlook iphumile ngaphambi kokucima / ukucima ikhompyuter yakho. Njengama-5, ukuba ucima okanye ucime ikhompyuter yakho ngaphandle kokuyeka i-Outlook, ifayile yakho ye-PST iya kuthi yonakaliswe. Ke, nangona kunqabile kancinci, soloko uqinisekisa ukuba i-Outlook yakho iphumile ngaphambi kokuvala inkqubo yekhompyuter yakho. Okanye unokwenza usetyenziso oluncinci ukujonga oku ngokuzenzekelayo.
Lumka ngenkqubo yakho ye-AntiVirus. Ukuba ifayile yakho ye-PST inkulu kwaye iqulethe ii-imeyile ezininzi, kwaye inkqubo yakho ye-AntiVirus iyakukhusela. Ke most Imisebenzi kunye nee-imeyile kwifayile yakho ye-PST iya kuchaphazeleka yinkqubo yakho ye-AntiVirus nayo. Ukuba inkqubo icotha, imisebenzi nayo iyakucothiswa. Kuxelwe ukuba ezinye iinkqubo zeAntVV zingayonakalisa ifayile yePST. IMicrosoft OneCare inokucima iifayile zePST.
Lumka nge-Outlook Yongeza i-Ins. Olunye udibaniso lwe-Outlook olungelulo olunokubangela urhwaphilizo lwefayile yakho yePST ukuba ayenziwanga ngokuchanekileyo okanye ngokusebenza ngokufanelekileyo. Ke ngoko, ngamanye amaxesha kufuneka ukhubaze ii-Add-Ins ukuba ifayile yakho ye-PST yonakaliswa rhoqo.
Backup iifayile zakho ze-PST qho ngeveki. Ugcino yeyona ndlela yokuthintela ukulahleka kwedatha. Soloko ugcina iifayile zakho ze-PST ngamaxesha athile ukuze nanini na xa ifayile yakho ye-PST yonakele kwaye ingenakufunyanwa, ungayibuyisela indawo yogcino lwamva nje.
Ukuba iifayile zakho ze-PST zonakalisiwe, kusenokwenzeka ukuba uyilungise kwaye uyilungise, ngezi zixhobo zilandelayo:
Iskipst.exe. Ikwabizwa ngokuba Isixhobo sokulungisa i-inbox. Esi sisixhobo sasimahla esifakwe nge-Outlook yakho. Ingalungisa i-most yeempazamo ezincinci kunye nokonakala kwiifayile zakho ze-PST. Ulwazi oluthe kratya lunokufumaneka ku Apha.
DataNumen Outlook Repair. Ukuba i-scanpst ayinakulungisa ifayile yakho ye-PST, okanye ayinakho ukubuyisa ii-imeyile ozifunayo, unokusebenzisa DataNumen Outlook Repair. Inokuphinda ifumane ifayile yePST eyonakaliswe kakubi. Logama nje kukho nayiphi na idatha ye-Outlook ekhoyo kwifayile yakho yePST eyonakeleyo, emva koko DataNumen Outlook Repair inokuzifumana kwakhona kwaye igcine kwifayile yePST emiselweyo.